Senator Abshir Bukhari “Dad iyo Deeggaan ahaan Galmudug ma mideysna” – Kalfadhi
Guddoomiye ku-xigeenka Kowaad ee aqalka sare ee Barlamanka Federaalka Jamhuuriyada Somaaliya Abshir Maxamed Axmed(Bukhaari), ayaa sheegay in Galmudug dad iyo deeggaan ahaanba aysan mideysneyn.
Guddoomiyaha ayaa hadalkaasi gellinkii dambe ee shalay ka sheegay, munaasabad Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa ku iclaaminayay murashaxnimadiisa madaxtinnimada maamulka Galmudug.
Sidoo kale waxaa uu khudbadiisa ku sheegay in Galmudug aaney ka jirin, adeeg wanaagsan iyo nabad-gelyo.
“Dadka dib-u-heshiisiin ayey u baahanyihiin marka la leeyahay, dad qoryo isku heysto ma jiraan laakiin deeggaanka, waxaa ka jira dareen colaadeed iyo dadkii oo aan helin hoggaan fiican. Marka dhibaatada ka jirta Galmudug la fiiriyo waxaa ay u baahantahay qof mas’uuliyadaasi weyn qaadi kara,” ayuu hadalkiisu sii raaciyay.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Jamhuuriyada Somaaliya, ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugaan deegaannada Galmudug, halkaasi oo ay ka socdaan qaban-qaabada shir-weynaha dib-u-heshiisiinta Galmudug.